ပုံ - Sprep.org
အပူပိုင်းဒေသကျွန်းပေါ်တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်တကယ့်ကိုအံ့ can စရာကောင်းနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်မိုးခေါင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်ပူစရာမလိုသည့်အခါ - ရာသီဥတုသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပျော့ပျောင်းသည်။ သက်ရှိများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောကမ်းခြေများ၊ အပင်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များမြောက်မြားစွာရှိသောတောတောင်များရှိသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်.
ဗနူအာတူးတွင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်သည်အခြားမည်သည့်နေရာ၌မဆိုပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နှစ်လျှင် ၆ မီလီမီတာဖြစ်သည် (စုစုပေါင်း ၁၁ စင်တီမီတာ) တစ်နေရာတွင်ပျမ်းမျှ ၂.၈ မှ ၃.၆ မီလီမီတာအကြားရှိသော်လည်းဤခမ်းနားထည်ဝါသောစော်ကားသောနိုင်ငံသည်အကြီးအကျယ်ခြိမ်းခြောက်ခံရသည်။
ဒါကြောင့်သူကသိစေခဲ့သည် အစိမ်းရောင်ငြိမ်းချမ်းရေးသူသည်သရုပ်ဆောင်နှင့်မော်ဒယ် Jon Kortajarena နှင့်အတူ Vanuatu သို့လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသောရပ်ရွာများသို့လည်ပတ်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်သည်အလွန်အားနည်းနေသောကြောင့်ယခုဖြစ်ရပ်သည်လူ ၁၀၀၀၀၀ ကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။ သို့သော်ဤတစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမဟုတ်ပါ။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများသည်တိုင်းပြည်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ကိုထိခိုက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဗာနူးတူလူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်သည်နှစ်စဉ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်စေသည်.
ပုံ - NBC
Greenpeace ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Pilar Marcos က၎င်းသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်များမဟုတ်ပါ၊ အကယ်၍ လုံလောက်သောအစီအမံများမလုပ်ပါက ၂၀၂၀ မတိုင်မီကကမ္ဘာဂြိုလ်၏အပူချိန် ၁.၅ ံစင်တီဂရိတ်ထက်မြင့်တက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲလာလိမ့်မည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရပ်များဖြစ်နိုင်သည့်အကန့်အသတ်များ။ '
သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၁ တွင်ဗန်နူးဝါးမှတောင်းဆိုသောစွမ်းအင် ၃၄% သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှလာသည်။ ၂၀၃၀ တွင် ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ ပြbeingနာတစ်ခုကသူ့ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှသာလျှင်လူသားဟာတကယ်ထိရောက်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုလုပ်သလား။ သို့ဆိုလျှင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အရွယ်ရောက်သူများကိုမနက်ဖြန်၏အရွယ်ရောက်သူများထံမှထွက်ခွာသွားသည့်အခါလှပနေရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ခံရနိုင်ဆုံးဒေသဖြစ်သည်
ရုပ်ပုံများ - ဂျူနိုအာကာသယာဉ်မှူးကဂျူပီတာရဲ့ထမ်းပိုးတွေရဲ့လှပမှုကိုပြတယ်